Alaabta dumarka ah ee hormoonada ah ee loo yaqaan 'hormone' - Dufanka AASraw
/ Products / Hormoonada Dumarka
Waxaannu nahay alaab gacmeedyada Haweeneyda Hormones, Kalluunka Hormoonnada budada ah ee iibka ah, Sida aan u ballanqannahay, dhamaan budooyinka Haweenkeena Hormoonkoodu waa ay ka yar yihiin 98%.
Dufanka dumarka ah
Hormoonnada ayaa leh saameyno muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka haweenka. Hormarka haweenka ee dumarka, estrogen iyo progesterone, ayaa ah kuwa ugu caansan sababtoo ah waxay saameyn ku leeyihiin caafimaadka taranka dumarka, laga bilaabo xaamilo ilaa uur leh iyo wax badan. Laakiin jirkaaga ayaa sidoo kale sameeya oo isticmaala noocyo kale oo hormoonno ah oo saameeya dhinacyada kale ee caafimaadkaaga - laga bilaabo heerka tamarta, miisaanka, niyadda iyo wax badan oo kale. Isbeddello badan oo dhaca sanadaha soo socda ee ku yimaada menopause (perimenopause) ayaa lagu keenaa heerarka hormoonnada ay soo saarto ugxan-yari, oo badankeeda estrogen.
Muddo dheer ayaa laga fikiray in horumarkan naasaha ee dhallaanka cusubi ay sabab u tahay hormoonnada haweenka ee budada ah (oestrogens) ee ku jira jirka hooyada oo maraya mandheerta muddada uurka iyo dhiirrigelinta horumarka naaska ee ilmaha.
Astaamaha ugu muhiimsan ee ugxan-yarta ee loo yaqaan 'hormoonada jinsiga' (steroid galmada) - iyo labaduba waa hormoonada iyo progesterone. Ukunku sidoo kale waxay soo saaraan qaar ka mid ah hormoonada labka ah, testosterone.
Inta lagu jiro qaan-gaarnimada, estrogen wuxuu kobciyaa naas-nuujinta waxaana uu keenaa siilka, ilmo-galeenka (ilma-galeenka) iyo tuubooyinka Fallopian (oo qaada ukunta ilma-galeenka) si ay u yeeshaan.
Waxay sidoo kale door ka ciyaareysaa koritaanka jirka waxayna bedeshaa qeybinta dufanka jirka gabadha, taasoo caadi ahaan keenta in lagu keydiyo miskaha, badhida iyo bowdyaha. Testosterone waxay gacan ka geysaneysaa kor u qaadida murqaha iyo koritaanka lafaha.
Estrogen. Sida hormoonka hormoonka haweenka ah, estrogen wuxuu kor u qaadaa koritaanka iyo caafimaadka ee xubnaha taranka haweenka wuxuuna ilaaliyaa siilka, nadiifinta (jilicsan), iyo sidoo kale dhiig. Heerarka qanjirrada guud waxay hoos u dhacaan inta lagu guda jiro perimenopause, laakiin waxay sidaas ku sameeyaan si aan caadi ahayn. Marmarka qaarkood waxaa dhici karta inay joogaan estrogen ka badan inta lagu jiro perimenopause marka loo eego sidii hore.
Marka lagu daro estrogen, heerarka hoormoonada kale ee uu soo saaro ugxan-hormoonada hormoonka ah (hormoon kale oo haween ah) iyo testosterone (hormoon lab iyo dheddig ah oo lagu soo saaray heerarka hoose ee haweenka) ayaa sidoo kale isbedelaya inta lagu guda jiro sanadkaaga bartamaha, sida lagu sharxay jadwalka hoose.
Jarista oo hoos u dhacda progesterone waxay saameysaa caadada caadada ka badan inta ay saameyn ku yeelanayaan jinsiga, laakiin hoos u dhac ku yimid da'da tijaabada ayaa laga yaabaa inay dhadhamiso libido (jinsiga baabuurta) haweenka dhexdhexaadka ah, inkastoo tani ay weli muran tahay. Xaqiiqda ah in estrogen uu hoos u dhaco ka badan testosterone qaar ka mid ah ayaa rumaysan in libido uusan hoos u dhicin cilladda menopause. Hoos-u-dhaca testosterone ee haweenka ayaa kaliya la xiriirta da'da, ma aha caado-qabasho, waxayna billaabataa sanado ka hor perimenopause.
Dufanka Estradiol (E2), ayaa sidoo kale loo yaqaan 'oestradiol', waa hoormoonka steroids estrogen iyo hormoonka haweenka ee ugu weyn. Waxay ku hawlan tahay qawaaniinta xayawaanka dheddigga iyo caadada dumarka. Kiimikada Estradiol ayaa mas'uul ka ah horumarinta sifooyinka jinsiga dumarka sida naasaha, ballaarinta miskaha, iyo qaabka haween ee qaybinta dufanka ee haweenka waxayna muhiim u tahay horumarinta iyo dayactirka unugyada taranka haweenka sida qanjidhada naasaha, ilmo-galeenka , iyo hoosta xubinta taranka, qaangaarka, iyo uurka. Waxa kale oo ay leedahay saameyn muhiim ah oo ku saabsan unugyo kale oo badan oo ay ka mid yihiin lafaha, dufanka, maqaarka, beerka, iyo maskaxda.
AASraw badanaa waxay bixisaa budada ceeriin ee budada estradiol, budada estradiol Benzoate, budada estradiol valerate, budada ethinyl estradiol, iwm. Dhamaantood waxay u damaanad qaadaan daahfurnaanta, tayada iyo deganaanshaha.
Muujinaya 1-16 ee natiijooyinka 20
Muuji Sheyada 32
Muuji Sheyada 48
Budada Allylestrenol (432-60-0)
Nomegestrol Acetate budada
Budada drospirenone (67392-87-4)
Megestrol acetate budada